मलाई आशा छ, यो अवस्थामा तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ । आनन्दमा हुनुहुन्छ । अनि, यो दिनलाई तपाईँले आफ्नो हातबाट रित्तै फुत्कन दिनुभएको छैन । कुनै न कुनै रूपमा, कुनै न कुनै
यता निर्वाचन सम्पन्नपछि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मुलुकभर केही छिटपुट घटना र अशान्तिका बाबजुद स्थानीय तहको निर्वाचन शान्त, मर्यादित र सहजरूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उता
अन्ततः स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो आलेख सार्वजनिक हुँदासम्म समयमै मतहरु गणना गर्ने कार्यको थालनी हुन सक्यो भने कुनै–कुनैको नतिजा सार्वजनिक भैसकेको हुनेछ भने धेरै मत खसेको विशेष
स्थानीय तहको चुनाव आयो भनेर देशैभरि दलहरुको दौडाहा भयो तर दौडाहा छैन रोजगारी सिर्जनामा, विदशी विनिमय सञ्चितिमा, ग्यास अभावको असह्य पीडामा । त्यसै गरी खेती उर्बर बनाई उत्पादन बढाएर व्यपारघाटा
स्थानीय तहको निर्वाचन भोलि देशभर हुँदै छ । ठूला भनिएका दलका उम्मेदवारले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने दाबीसमेत गरिसकेका छन् । यसअघिको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना नगर÷गाउँवासीलाई बाँडेका
राजनीतिक स्वच्छता खै ?
यतिखेर मुलुक स्थानीय निकायको चुनावको सरगर्मीले निकै तातेको छ । दर्ता भएर अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक दलका चुनावी प्रचारप्रसार कार्यक्रमका साथै, चुनावी -याली, जुलुस, सभा आदि कार्यक्रमहरु देशभर नै भइरहेका
डिल्लीराम मिश्र ‘कलमजीवी’ नेपालमा वैधानिक पद्धति र परम्परा अनुरुप शासन प्रणालीको निर्वाचन इतिहासलाई त्यति लामो मान्न सकिन्न । सर्वप्रथम राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज पद्मशमशेरले नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनको घोषणापश्चात्
ठोरीको जंगलमा गणेशमान सिंह समातिए
शिवलाल श्रेष्ठ (अनुवादक) नयाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले राजा त्रिभुवन पनि सन्तुष्ट भएका थिए । स्रोत–साधन सम्पन्न एउटा राजनीतिक शक्तिको उदय भएको थियो । भारतीय नेताहरुको नैतिक समर्थन, नेपाली कांग्रेसले भारतीय
कवि भूपि शेरचनका कविताका पात्र ‘हामी’
‘हामी कहिल्यै आफूखुशी जुट्न नसक्ने पछाडिबाट कसैले जुटाई दिनुपर्ने, हामी कहिल्यै आफूखुशी फुट्न पनि नसक्ने पछाडिबाट कसैले फुटाई दिनुपर्ने, रङ्गरोगन उडेका, टु्टेका फुटेका क्याराम बोर्डका पुराना गोटी हौं हामी मान्छे
बालकृष्ण मैनाली अब आउने शुक्रबार स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताहरुले आफ्नो मत जाहेर गरेर योग्य उम्मेदवार छनौट गर्ने दिन परेको छ । त्यस्तो दिन पाँच वर्षमा अझ भनौं १८ सय २५ दिनमा
चुनावले विगत र वर्तमानसँग आगतसँग गाँस्न सुझाउँदै छ । चुनावी परिणामलाई लगाइने अनुमानमध्ये काठमाडौँको लडाइँ निकै नै रोचक हुने देखिन्छ । जनतामा बढेको राजनीतिक वितृष्णा र सिद्धान्त बिर्सने दलीय शैलीलाई
यात्राको भरपर्दो सारथी बनेको छ ‘पठाओ’
सिर्जना पोख्रेल स्टाफ नर्स हुन् । उनी सार्वजनिक बिदा र शनिबारबाहेक अन्य दिन अस्पताल जान्छिन् । कीर्तिपुर बस्ने सिर्जना शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कार्यरत छिन् । उनको
बिहानै रेडियोले हाँडीगाउँका ५ सय कार्यकर्ता भद्रगोल पार्टी परित्याग गरी मारमुङ्ग्री पार्टीमा प्रवेश गरेको समाचार प्रसारण ग-यो । घरको मतानमा रेडियो झुन्ड्याएर भैँसी दुहुँदै गरेका वीरकाजी त्यो समाचार सुनेर छक्कै
अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट पारित भएपछि देशमा यसबारे चर्चा–परिचर्चा चुलिएको थियो । अहिले स्थानीय चुनावले गर्दा यसको चर्चा केही मत्थर भएको मात्र हो, साम्य
दलहरु गालीगलौजमा, चुनावी मुद्दा ओझेलमा
स्थानीय चुनाव ढोकामै आउन थालेको छ । गत ११ र १२ गते भएको उम्मेदवार मनोनयनको अवस्थालाई हेर्दा ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको उपस्थिति आवश्यकताभन्दा निकै बढी देखियो । कतिपय
भारतमा सत्याग्रहको प्रतिपादक महात्मा गान्धीले ‘अनशन’ (अन्न त्याग) लाई विरोध जनाउने हतियारको रुपमा विकसित गरी उत्कृष्ट एवं अत्यन्त फलदायीरुपमा प्रयोग गरेका थिए । उनले केवल शक्तिशाली बृटिस राजलाई मात्र नभएर
देश बनाउन भिजन चाहिन्छ । भिजन राजनीतिज्ञहरूसँग हुनुपर्छ । नेताले भिजन निर्माणका लागि प्रचुर अध्ययन गर्नुपर्छ । विनाअध्ययन, मनन, चिन्तन र भ्रमण भिजन निर्माण हुँदैन । विश्वका चर्चित देश बन्नुमा
आज मजदुर दिवस । संयोग नै मान्नुपर्दछ, २०७९ सालको पहिलो महिनालाई एकातिर आजकै दिन मजदुर दिवस मनाइरहेका छौं भने अर्कोतिर आजको दिनबाट गन्ती शुरु गर्दा अबको १३ दिनमा स्थानीय निर्वाचनमा
स्थानीय चुनावपछि सुधार्नै पर्ने संस्कार र प्रणाली
प्रायः सानातिना लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक बखेडा, फितलो कानुन, बेरोजगार तथा महँगीजस्ता समस्या भई नै रहन्छन् । यस्ता समस्याको हल हामीले नै गर्ने हो । तर भनेर के गर्ने र ?
एउटा कथा छ । एकजना गरिब मानिस थियो । ऊसँग न त जमिन थियो, न जीविका चलाउने कुनै उपाय । जसोतसो गरेर उसले केही पैसा जम्मा ग-यो । त्यसबाट ऊ